1980 – Year – Alpha Premium
The Young Master (1980) ##unicode ဂျက်ကီချန်းရဲ့ကားဟောင်းပေမယ့်ကောင်းနေသေးတဲ့ကားတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ လောင်(ဂျက်ကီချန်း)တို့ညီအစ်ကိုက မိဘမဲ့တွေပါ။ သူတို့ကိုငယ်ငယ်ကတည်းက ကိုယ်ခံပညာကျောင်းက ဆရာကခေါ်ယူမွေးစားထားတာပေါ့။ လောင်ရဲ့အစ်ကိုကျင်းက ကျောင်းမှာအတော်ဆုံးကျောင်းသားဖြစ်ပြီး အားကိုးရတဲ့သူပါ။ တစ်နေ့တော့သူတို့မြို့မှာ ခြင်္သေ့အကပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့ဖြစ်လာပြီး လောင်တို့ကျောင်းနဲ့ပြိုင်ဘက်ကျောင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။ အဲ့ပွဲမှာ ကျင်းကခြင်္သေ့ခေါင်းပိုင်းကနေ ကဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ ပြိုင်ပွဲနားနီးမှ ခြေထောက်ဒဏ်ရာရပြီး မပြိုင်နိုင်တော့လို့ သူ့နေရာကိုလောင်ကအစားဝင်လိုက်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲမှာ လောင်တို့ဘက်ကရှုံးသွားပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျင်းကထိခိုက်မိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြိုင်ဘက်ကျောင်းနဲ့ပေါင်းပြီး ပြိုင်ဘက်ကျောင်းဘက်က ခြင်္သေ့ခေါင်းပိုင်းကနေဝင်ကသွားတာပါ။ အဲ့အကြောင်းကို သူ့ဆရာသိသွားတော့ ကျင်းကိုကျောင်းကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ လောင်ကသူ့အစ်ကိုကိုပြန်လိုက်ရှာဖို့ထွက်လာရင်း အခက်အခဲပေါင်းစုံတွေ့ရပုံကို ဂျက်ကီချန်းကားတို့ထုံးစံအတိုင်း ဟာသလေးနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင် ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ဇာတ်ကားဟောင်းလေးပြန်ကြည့်ရင်း ငယ်ဘဝကဟီးရိုးကြီးကိုလည်း ပြန်ခံစားလို့ရပါတယ်။ ##zawgyi ဂ်က္ကီခ်န္းရဲ႕ကားေဟာင္းေပမယ့္ေကာင္းေနေသးတဲ့ကားတစ္ကားကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ေလာင္(ဂ်က္ကီခ်န္း)တို႔ညီအစ္ကိုက မိဘမဲ့ေတြပါ။ သူတို႔ကိုငယ္ငယ္ကတည္းက ကိုယ္ခံပညာေက်ာင္းက ဆရာကေခၚယူေမြးစားထားတာေပါ့။ ေလာင္ရဲ႕အစ္ကိုက်င္းက ေက်ာင္းမွာအေတာ္ဆုံးေက်ာင္းသားျဖစ္ၿပီး အားကိုးရတဲ့သူပါ။ တစ္ေန႔ေတာ့သူတို႔ၿမိဳ႕မွာ ျခေသၤ့အကၿပိဳင္ပြဲက်င္းပဖို႔ျဖစ္လာၿပီး ေလာင္တို႔ေက်ာင္းနဲ႔ၿပိဳင္ဘက္ေက်ာင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာပါ။ အဲ့ပြဲမွာ က်င္းကျခေသၤ့ေခါင္းပိုင္းကေန ကဖို႔စီစဥ္ထားေပမဲ့ ၿပိဳင္ပြဲနားနီးမွ ေျခေထာက္ဒဏ္ရာရၿပီး မၿပိဳင္ႏိုင္ေတာ့လို႔ သူ႔ေနရာကိုေလာင္ကအစားဝင္လိုက္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေလာင္တို႔ဘက္ကရႈံးသြားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်င္းကထိခိုက္မိတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ေက်ာင္းနဲ႔ေပါင္းၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ေက်ာင္းဘက္က ျခေသၤ့ေခါင္းပိုင္းကေနဝင္ကသြားတာပါ။ အဲ့အေၾကာင္းကို သူ႔ဆရာသိသြားေတာ့ က်င္းကိုေက်ာင္းကေနေမာင္းထုတ္လိုက္ပါတယ္။ အဲ့လိုနဲ႔ ေလာင္ကသူ႔အစ္ကိုကိုျပန္လိုက္ရွာဖို႔ထြက္လာရင္း အခက္အခဲေပါင္းစုံေတြ႕ရပုံကို ဂ်က္ကီခ်န္းကားတို႔ထုံးစံအတိုင္း ဟာသေလးနဲ႔ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းေအာင္ ႐ိုက္ကူးထားတာပါ။ ဇာတ္ကားေဟာင္းေလးျပန္ၾကည့္ရင္း ငယ္ဘဝကဟီး႐ိုးႀကီးကိုလည္း ...
IMDB: 7.2/10 6,518 votes
IMDB: 5.8/10 4,666 votes
Cannibal Holocaust Cannibal Holcaut 1980 ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ IMdB 5.9/6ရထားတဲ့ Adventure/Horror ဇာတ်လမ်းလေးပါ. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Allenဟာ သူ့ကောင်မလေးဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ညွန်းရေးဆရာမလေးရယ် ကင်မရာမန်းနှစ်ယောက်ရယ်နဲ့ အမေဇုန်တောနက်ထဲ အစိမ်ရောင်ငရဲခန်းလို့ တင်စားထားတဲ့ အသားစားလူမျိုးစု နှစ်ခုရှိတဲ့ နေရာကို စွန့်စားသွားလာခဲ့ပါတယ်. သူတို့အဲ့ဒီကို သွားလာရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဲ့လူမျိုးနွယ်စုနှစ်ခုရဲ့ လူနေမှုစရိုက်ကို မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့ပါ.. ဒါပေမယ့် သူတို့ အဲ့ဒီကို ရောက်သွားပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာ ဘာသတင်းမှ မကြားရတော့တာကြောင့် နယူးရော့ တက္ကသိုလ်က မနုဿဗေဒပေါမောက္ခတစ်ဦးဟာ သူတို့နောက်ကို စွန့်စားပြီး လိုက်လာခဲ့ပါတယ်. ပေါမောက္ခဟာလဲ တောထဲမှာ လမ်းပြနဲ့အတူ သွားရင်း သူတို့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေကို ရောက်ရှိသွားပြီး စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ သူတို့အလောင်းတွေကိုပဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ်.ဒါပေမယ့် ပေါမောက္ခကြီးဟာ အသိညဏ်ပညာရှိသူဖြစ်တာကြောင့် လူရိူင်းတွေကို စည်းရုံးပြီး သူတို့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဖလင်တွေကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်. အမေရိကန်ကို ပြန်ရောက်ပြီး ဖလင်တွေကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သူတို့လေးဦးဟာ ဘာတွေရိုက်ကူးခဲ့တယ် လူမျိုးနွယ်စုတွေဟာ တကယ်ပဲ အသားစားသလား? တကယ်ပဲ ရက်စက်သလား??? ဆိုတာကို မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်တစ်ခု အဖြစ်တင်ဆက်ထားတာကြောင့် ဗဟုသုတရစေမှာပါဗျာ
IMDB: 5.9/10 49,050 votes